CarPlay ga-abịakwute ụfọdụ ụdị BMW na ikuku | Esi m mac
Ọ bụ ezie na akụkọ anyị na-anụ banyere ya CarPlay ha dị ụkọ ma na-agbasa na oge ma ọ bụrụ na anyị ejiri ha tụnyere ihe a na-ebipụta kwa ụbọchị n'ihe metụtara ngwaọrụ na ọrụ ndị ọzọ nke apụl bitten, Ọ pụtaghị na ọ bụ ihe na-eme mkpọtụ ma ọ bụ na o chefuola kpamkpam.
Afọ 2016 abụrụla afọ ahọpụtara ọtụtụ ndị na-emepụta ụgbọ ala maka itinye na sistemụ ụgbọ ha nke Apple CarPlay. Otu ihe doro anya bụ na Apple na-arụ ọrụ nzuzo na-akpọ aha Titan na nke metụtara ụgbọ ala, mana ugbu a naanị ihe anyị nwere ike ikwu maka nke ahụ metụtara ụgbọ ala bụ CarPlay.
Ọtụtụ ndị na-emepụta etinyelarị CarPlay sistemụ na usoro igodo nke ugbo ala ha, site na ijikọ iPhone na sistemụ ọdịyo nke ụgbọala ahụ, ọ nwere ihu mmetụ agba agba nke na-enye ohere iji usoro iOS a gbanwere na ụgbọ ala. BMW achọghị ka a hapụrụ ya na ya esesịn a mara na na njedebe nke 2016 ụfọdụ n’ime ụgbọ elu ya ga - enwe CarPlay.
The BMW ụdị na ị anyị na-ekwu okwu banyere BMW X5 na X6 MUgbo ala nke nwere ihuenyo LCD nke nwere sentimita asatọ karịa iPad nke 9.7-inch na nke ahụ ruru diagonal nke 10.25 sentimita asatọ.
Ihe omuma ohuru nke anuru asusu bu na site na nha nke diagonal wireless CarPlay ga abia maka oge mbu ya bu na rue mgbe ufodu nke iOS 9 nani uzo ijikọ na CarPlay bu site na eriri na nke ahụ ka bụ ikpe. . ebe ọ bụ na ọtụtụ n'ime ndị na-emepụta ihe na-emepụta ihe anaghị arụ ọrụ ikuku.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » The CarPlay ga-abịa ụfọdụ ụdị BMW na ikuku